मधेस झरेका प्रचण्डका प्रश्‍नैप्रश्‍न : के पार्टी यकता बाट खुसि छैनन् प्रचण्ड ? - Nepal Bizz
काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तराई मधेसले बलिदानीको प्रतिफल नपाएको बताएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या गरिएका तत्कालीन माओवादीका नेता रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभालाई सोमबार बर्मझियामा सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनपछि मधेसका नागरिकले झन् दुःख पाएको बताए।
विगतका सबैजसो आन्दोलनमा तराई मधेसले सबैभन्दा बढी बलिदानी गरेको बताउँदै उनले मधेसका जनताले त्यसको प्रतिफल भने नपाएको जिकिर गरे।
‘तपाईँले गरेको त्याग र बलिदानीअनुसार प्रतिफल पाउनुभएको छ कि छैन ?’, सभाका सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोधे, ‘यो प्रदेशको सरकारले के कति काम गर्‍यो ? सुशासनले गति लियो ? विकास हुन थाल्यो ? सरकार तुरुन्त आएर सहयोग गर्न थाल्यो त ?’
नयाँ परिवर्तनपछि झन् भ्रष्टाचार बढेको र जनतालाई दुःख भएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै उनले सोधे- ‘हामी यसैका लागि लडेको हो त ?’
दुई तिहाईको बलियो सरकार हुँदा पनि केही गर्न नसके ‘सतिले सरापेको…’ भनेजस्तै हुने प्रचण्डले टिप्पणी गरे। ‘सरकारमा हुँदा पनि गर्न सकेनौँ भने, पहाडतिर भन्ने गरिन्छ सतिले सरापेको देश…’, प्रचण्डले भने, ‘हामी जीवित छउन्जेल अरु कुनै पार्टी आएर विकास गर्दैन।’ कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र देशको विकास गर्न सक्ने उनको दाबी छ।
प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भएको प्रतिक्रियावादीलाई मन नपरेको जिकिर गर्दै उनले देश भित्र र बाहिर नेताहरूलाई बदनाम गर्ने खेल भएको बताए। सोसल मिडियामा झुटा प्रचार गरेर नेताहरूलाई बदनाम गर्ने र पार्टीभित्र फाटो पार्ने काम भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपछि सभालाई सम्बोधन गरेका प्रचण्डले माधवको भाषणतर्फ संकेत गर्दै आफूलाई ईर्ष्या लागेको बताए। माधव नेपालले मैथिलीमा भाषण गरेका थिए।
Posted on १५ पुष २०७६, मंगलवार १६:०९ Author admin
Posted on ९ आश्विन २०७६, बिहीबार ०७:५५ Author admin